Karazana solosaina metaly - Huizhou WeiHua Technology Co., Ltd.
Takelaka anarana vy maharitra
Ao amin'ny takelaka vy indostria, metaly be mpampiasa matetika dia misy ny aliminioma, firaka aliminioma, vy vy, vy, varahina, varahina, nikela, sns Anisan'izany, ny fitaovana toy ny vy tsy misy fangarony sy ny ravina vita amin'ny vy dia manana tanjaka lehibe, androm-piainana lava, ary azo averina.
Ny solosaina vy no ankamaroan'ny fampiasa amin'ny famantarana lehibe eny ivelany.
Ny fizotrany ampiasaina matetika dia misy ny fitomboka, ny forging, ny polishing, ny polishing, ny sandblasting, ny electroplating, ny fitrandrahana, ny pirinty vita amin'ny landy, ny voasokitra ary ny casting casting.
Ny famantarana vy dia izao no vokatra famantarana mahazatra indrindra an'ny mpanamboatra lovia vy.
Ny solosaina vy matetika dia misy takelaka firaketana vita amin'ny aliminioma, solosaina vy tsy misy fangarony, famantarana electroforming, mari-pamantarana firaka zinc, famantarana vita sokitra, famantarana marika voasokitra, marika fanaovana sokitra, mari-pamantarana CD, sns.
Takelaka misy anarana aluminium
Takelaka misy anarana tsy misy vy
sary famantarana ny firaka zinc
Takelaka misy anarana varahina
Label ny modely CD
Ny horonan-tsary dia mampiseho ny milina fanamafisam-peo fitohitohy mandeha ho azy pneumatic. Ny zavatra hitantsika tao amin'ilay horonantsary dia dingana iray mahazatra ho anay mba hanaovana fizarana fametahana famantarana, izay mifototra amin'ny fiovan'ny plastika amin'ny vy, amin'ny alàlan'ny famolavolana sy ny fanamafisam-peo dia manery ny vy metaly hiteraka fihoaram-pefy plastika na fisarahana amin'ny metaly. , Amin'izany dia mahazo fomba fanodinana vy amin'ny faritra misy endrika, habe ary fampisehoana iray.
Ity dingana ity amin'ny ankapobeny dia mety amin'ny famokarana andiany lehibe kokoa. Mora kokoa ny fandidiana, mora ny mahatsapa fa ny fampifangaroana ny mekanisialy sy ny automatisation, ary ny fahombiazan'ny famokarana avo lenta (Ny masinina totohondry dia afaka mahatsapa totohondry 50 isa-minitra araka ny hita amin'ny horonan-tsary), ambany ny vidiny. Ny ampahany amin'ny stamping rehetra dia manana refy marina sy avo lenta.
Amin'ny ankapobeny, ny fizotry ny fametahana dia azo zaraina ho fizotran-javatra efatra: ny fanatsobohana lalina ny sary-amin'ny famoronana ampahany.
Fitaovana fanontana mahazatra dia:
Firaka aliminioma, vy vy, vy ambany karbaona, firaka varahina, sns.
Famantarana Logo Metal-Dingana fanetezana haingam-pandeha
Ny zavatra hitanao amin'ny horonan-tsary dia ny fizotran'ny fanapahana hazavana ambony mahazatra. Izy io dia fomba fanodinana izay mampiasa milina fanaovana sokitra tsara mba hanamafisana ny fitaovana amin'ilay milina haingam-pandeha mihodina haingam-pandeha hanapahana ampahany. Eo amin'ny sisin'ny vokatra, ny embossing ary ny toerana hafa izay mila zahana miharihary, ny fizotran'ny fikosoham-bary dia miteraka vokatra manasongadina eo an-toerana.
Matetika, ny vokam-bokatra dia manana sisiny mamiratra (zoro C), velarana mamiratra, firafitra CD.
Mandritra izany fotoana izany, io fomba io dia matetika ampiasaina amin'ny tranga finday, akorandriaka elektronika, trano sigara elektronika, famantarana audio, famantarana haingon-trano fanasana lamba, famantarana sonia, famantarana haingon-tsoratry ny microwave, sns.
Logo famantarana Metal-Fomba fanefitra mandeha ho azy
Mampiseho dingana famafazana mandeha ho azy ny horonantsary, izay dingan'ny mahazatra ihany koa amin'ny famantarana vy maro. Ity fomba ity dia mazàna mampiasa basy spray na «atomizer disk». Miaraka amin'ny fanampian'ny tsindry na ny hery afovoany dia miparitaka anaty volo mitambatra sy tsara izy ary apetaka amin'ny faritra ambonin'ilay zavatra hosaronana.
Mampiseho ny famafazana mandeha ho azy ny horonantsary. Ity fizotran'ny famafazana ity dia soloin'ny solo-sainanao nomerika iray, izay afaka mitadidy sy mitahiry famafana data debugging. Izy io dia manana tanjaka iraisana, hafainganam-pandeha haingana, fahombiazan'ny famafazana avo, ary tombony avo lenta, izay mampihena be ny fotoana sy ny asa.
Ity dingana fanefitra mandeha ho azy ity dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny fitaovana, indostrialy plastika, indostrian'ny fanaka ary sehatra hafa. Izy io dia mety amin'ny karazana mari-pamantarana aliminioma, mari-tsoratra, endritsoratra miendrika embossed sy recessed sns.
Fametahana marika vita amin'ny marika Logo
Ny fitomboka vita amin'ny embossed-recessed dia teknolojia fanodinana vy. Izy io dia mampiasa die embossed-recessed die mba hanaratsiana ny takelaka amin'ny tsindry sasany, amin'izay hanodinana ny faran'ny vokatra. Taratasy, isa ary lamina samihafa vita amin'ny embossed sy recessed isan-karazany no nasiana tombo-kase mba hanatsarana ny fahatsapana telo-refy amin'ny vokatra.
Ny fametahana bump dia mazàna dia mizara ireto karazana totohondry ireto:
Masinina famonoana tanana: tanana, fahombiazan'ny asa ambany, fanerena ambany, mety amin'ny fikarakarana tanana toy ny lavaka kely.
Punch mekanika: fampitana mekanika, hafainganam-pandeha, fahombiazana avo, taonina lehibe, fahita indrindra.
Punch Hydraulika: fandefasana hydraulic, miadana kokoa noho ny hafainganam-pandehan'ny mekanika, taonina lehibe kokoa, ary mora kokoa noho ireo mekanika, dia mahazatra be izany.
Gazety pneumatika: famindrana pneumatika, mitovy amin'ny tsindry hydraulic, nefa tsy marin-toerana toy ny tsindry hydraulic, matetika tsy fahita firy.
Karazana famantarana inona amin'ny ankapobeny no mety amin'ny fizotran'ny fametahana?
Ity fizotrany ity dia matetika mety amin'ny fametahana litera mihidy taratasy / ambongadiny, alim-borona alim-pito, marika famantarana alimika mivalona / marindrano mitaingina marika / marika amam-baravarana vita amin'ny alim-bary, ary taratasy fanoratana / tarehimarika voarohirohy / lamina napetraka ary marika hafa.
Fomba fanaingoana marika famantarana marika vita amin'ny masinina manokana
Aseho ao anatin'ilay horonantsary ny fizotran'ny fikosehana masinina.
Amin'ny ankapobeny, ity karazana haitao fanodinana ity dia fomba fanodinana teknika izay anerena ny vy amin'ny alàlan'ny lasitra eo ambanin'ny fihetsiky ny hery ivelany, voageja ny faritra ampitana ny metaly, avy eo nahazo ny endrika faritra takiana sy habe.
Araka ny hitanao amin'ny horonantsary, ity dia fomba iray hampiasana lambam-pandriana vita amin'ny borosy mba hamaly sy hikosehana etsy sy eroa ny lafin'ny vokatra hanatsarana ny fiafaran'ny vokatra. Hita miharihary fa ny firafitry ny takelaka takelaka aluminium ao anaty horonantsary dia mitanjozotra, izay afaka manatsara ny kalitaon'ny haavony ary manafina ny gorodona madinidinika eny amboniny.
Ny dingan'ny fikosohan-doha amin'ny vy dia mety hanafina tsara ireo lamina mekanika sy ireo kilema fametahana bobongolo amin'ny famokarana ary mety hahatonga ny vokatra ho tsara tarehy kokoa.
Misy firafitra borosy efatra mahazatra:
1. Fanosorana tariby mahitsy
2. Fanosorana lamina tsy mitongilana
3. Fanosotra kofehy
4. Fanosotra tariby mihombo
Karazana famantarana inona no mety indrindra amin'ny fikosehana?
Ny ankamaroan'izy ireo dia ampiasaina amin'ny marika borosina vy sy alim-baravarana alimina, ary ampahany kely no ampiasaina amin'ny famantarana borosy varahina.
Fanamboarana ny mari-pamantarana vy amin'ny pirinty.
Mampiseho ilay horonantsary fa dingana iray hafa iraisana amin'ny fanaovana famantarana, ny fizotry ny fanontana amin'ny efijery.
Ny fanontana amin'ny efijery dia manondro ny fampiasana ny silkscreen ho toy ny fototra takelaka, ary amin'ny alàlan'ny fomba fanaovana takelaka fakan-tsary azo zahana, vita amin'ny takelaka fanontana lamba misy sary sy lahatsoratra. Ny fanaovana pirinty dia misy singa lehibe dimy, takelaka fanontana lamba, squeegee, ranomainty, latabatra fanaovana pirinty ary substrate.
Tombontsoa amin'ny fanontana efijery:
(1) Manana adaptability mahery izy ary tsy voafetra amin'ny habe sy ny endrik'ilay substrate. Ny fomba fanontana telo amin'ny fanontana pirinty, ny fanaovana embossing ary ny fanontana gravure amin'ny ankapobeny dia azo atao pirinty amin'ny substrate fisaka ihany. Ny pirinty amin'ny efijery dia tsy vitan'ny pirinty amin'ny sehatra fisaka ihany, fa koa manonta amin'ny substrate miolakolaka, boribory ary concavex.
(2) Ny sosona ranomainty dia manana hery matotra manarona, izay azo ampiasaina amin'ny fanontana fotsy madio amin'ny taratasy mainty rehetra misy vokany telo-mahery.
(3) Mety amin'ny karazana inks isan-karazany, ao anatin'izany ny karazana emulsion resin-menaka, miorina amin'ny rano, karazana emulsion synthetic, vovoka, ary karazan-tinta hafa.
(4) Mety sy tsotra ny fanaovana takelaka, ary mora ny vidiny.
(5) Fametahana ranomainty mahery
(6) Izy io dia azo asiana lamba vita amin'ny landy amin'ny tanana na amin'ny pirinty
Karazana famantarana inona no ampiasain'ny ankamaroan'ny fizotran'ny lamba landy?
Ny fizotran'ny fanontam-pirinty amin'ny ankapobeny dia mety amin'ny mari-pamantarana taratasy fanontana lamba amin'ny alim-baravarankely, mari-pahaizana maodely fanonta lamba vita amin'ny alimo, ary mari-pahaizana nomerika fanaovana pirinty vita amin'ny alimo.
Ahoana ny fomba hanaovana famantarana vy?
Andao haka ny mari-pamantarana aluminium avy amin'ny mpanjifa vahiny iray ohatra hanoro anao ny fomba fanamboarana solika vy.
Dingana 1 manapaka ny fitaovana, manapaka takelaka lehibe vita amin'ny aliminioma amin'ny ampahany sasany amin'ny haben'ny vokatra azo ampiasaina.
Dingana 2 Sasao, atobohy amin'ny rano mihena ny otrikaina miaraka amin'ny refy tsara mandritra ny 25 minitra, avy eo atsofohy anaty rano madio hanesorana menaka sy menaka, ary atsofohy ao anaty lafaoro 180 ° ary endaso mandritra ny 5 minitra mandra-pahamaina ny rano.
Dingana 3 manonta fotsy, apetaho ny efijery 120T amin'ny milina fanontam-pirinty mandeha ho azy, mampiasa kodiarana elektrostatika hanesorana ny vovoka ambonin'ny tany, ary avy eo ampiasao menaka fotsy miisa 4002 hanonta fotsy, rehefa vita ny fanontana dia apetaho amin'ny lafaoro ao amin'ny tunnel ny vokatra. manendasa sy manendasa Rehefa avy namboarina dia apetraho ao anaty lafaoro 180 ° ary endaso mandritra ny 15 minitra
Dingana 4 mena manonta, ny dingana dia mitovy amin'ny dingana fahatelo, afa-tsy ny loko ranomainty novaina ho mena.
Dingana 5 manga pirinty, ny dingana dia mitovy amin'ny dingana fahatelo, afa-tsy ny loko ranomainty novaina ho manga.
Dingana 6 pirinty mainty, ny dingana dia mitovy amin'ny dingana fahatelo, afa-tsy ny loko ranomainty novaina ho mainty.
Dingana 7 Mofomamy, apetraho ao anaty lafaoro 180 ° ny vokatra ary atsofohy mandritra ny 30 minitra. Rehefa vita ny fanaovan-tsakafo dia misafidiana kisary vitsivitsy hanatanterahana ny fitsapana MEK 50 fihodinana mba hisorohana ny fahaverezan'ny ranomainty mandritra ny fizotran-tany.
Dingana 8 Ampiharo ilay horonantsary, apetaho amin'ny milina fanosotra ilay sarimihetsika miaro 80A, apetaho ny vokatra aorian'ny fandefasana ny methyl etil ketone 100 amin'ny masinina fanosotra mba hahazoana antoka fa tsy miketrona ilay sarimihetsika, ary manao ny Divide ny mpandraharaha.
Dingana 9 fandavahana, fanesorana ny milina fanaovana totohondry hametrahana azy sy hamonoana azy ho azy, manamarina ny fametrahana ny lavaka ilay mpandraharaha mba hahazoana antoka fa tsy mihoatra ny 0.05mm ny fiviliana lavaka.
Dingana 10 fametahana embossing, apetaho ao anaty totohondry 25T ny vokatra ho an'ny fametahana azy, ny haavon'ny embossing dia mifanaraka amin'ny sary.
Dingana farany fanaraha-maso feno + fonosana
Anisan'ireo vokatra amin'ny famantarana vy, ny vidin'ny aliminioma dia lafo sy mora vidy. Ny fizotrany lehibe indrindra dia ny fitomboka sy ny famafazana, ny famafazana, ny famolahana ary ny fanaovana tariby ary ny kalitaon'ny fanohanana dia azo antoka mandritra ny 3-5 taona.
Ny sakana fampiharana dia malalaka be. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny varavarana, varavarankely, lakozia, fanaka, varavarana hazo, fitaovana elektrika, jiro ary haingon-trano fivarotana.
Ireo nomeplates aluminium dia manana ireto toetra manaraka ireto:
Ny aliminioma dia tsy vitan'ny fanoherana loto ihany fa koa tsy mahazaka harafesina;
Raha mila takelaka vy ianao dia afaka mahatohitra tontolo iainana henjana sy mitazona azy amin'ny toerana tsara aorian'ny fifandraisana mivantana, toy ny tara-masoandro, orana, lanezy, vovoka, loto ary zavatra simika, dia ny signage aluminium no safidinao tsara indrindra;
Ny Aluminium dia afaka miaina rehefa tratry ny taratra ultraviolet amin'ny masoandro ary mety manohitra ny toetran'ny simika amin'ny akora simika sasany aza, noho izany ny aluminium dia mahazaka harafesina koa.
Ny aluminium dia maivana indrindra;
Raha mila vy maivana ianao, dia ny alimo no ilainao. Ny nomeplates aluminium dia maivana ary azo apetraka mora amin'ny rindrina sy ny varavarana amin'ny fampiasana adhesives. Ny metaly hafa dia mety ho mavesatra loatra ary mitaky fampiasan'ny visy sy ny rivet.
Raha tsy te-hanao lavaka amin'ny rindrina ianao na hametaka ny takelaka vy eo am-baravarana dia azo antoka fa safidinao ny aluminium satria afaka apetraka tsy misy ireo fitaovana mavesatra ireo.
Aluminium dia tena mora vidy;
Ny iray amin'ireo tombony be indrindra amin'ny aliminioma dia ny vidiny ambany. Azonao atao ny mampiasa nomeplates aluminium mba hitahiry vola ho an'ny takelaka hafa, ary ny ampahany kely amin'izy ireo dia afaka mampiasa karazana metaly na fitaovana hafa.
Amin'izany fomba izany dia tsy vitan'ny ahazoana solosaina metaly ambony kalitao hiteraka fangatahana, fa hitsitsiana vola ihany koa.
Aluminium dia manana plastika mahery;
Ny solosaina alimina dia azo aseho amin'ny fomba maro samihafa. Azonao atao ny mamorona ny volavolao amin'ireto takelaka ireto.
Amin'ny toerana maro samihafa, azonao atao ihany koa ny misafidy ny hampiasa sandblasting, spraying, electroplating, sary an-tariby, sokitra, etching, ary pirinty lamba vita amin'ny landy, anodizing ary dingana hafa hafa hanaovana famantarana aluminium. Tena azo ovaina izany.
Ireto ambany ireto ny fiasa amin'ny takelaka anarana aluminium:
Ny mari-pamantarana vita amin'ny alim-borona vita amin'ny alim-baravarankely dia haingon-trano, mora volavolaina ary mora miondrika.
Raha ampiasaina ao an-trano ny marika alimina anodisedra namboarina dia tsy hanova loko mandritra ny fotoana maharitra izany, tsy hanimba, hampihena oksizenina ary harafesina.
(3) fahatsapana metaly mahery:
Ny famantarana aluminium vita amin'ny anodized dia manana hamafin'ny faritra avo, fanoherana tsara, ary manolotra vokatra tsy misy solika, izay afaka manasongadina ny famirapiratan'ny metaly sy manatsara ny kalitaon'ny vokatra ary manome lanja fanampiny.
(4) fanoherana mahery vaika:
Ny fambara anodized dia tsy mora maloto, mora diovina ary tsy hamokatra toeran-tsiranoka.
Fitsaboana ambonin'ireo takelaka alimina Fampiasana marika tag aluminium
Fankatoavana ny voninkazo Fametahana elektronika (finday, sns.)
Lamin'ny CD Famantarana elektrika (lafaoro misy microwave, sns.)
Sandblasting Famantarana fitaovana mekanika (thermometer barometrika, sns.)
Nikosokosoka Famantarana ireo kojakojan-tokatrano (fividianana rivotra sns.)
mpitan- Famantarana fitaovana mandeha ho azy (mpamily, sns.)
Fanapahana hazavana avo Biraon'ny famatsian-birao (varavarana sns.)
Oxydation anodika Fambara fandroana (faucet, fandroana, sns.)
Fanodinana loko roa Famantarana feo (feo JBL, sns.)
Famantarana enta-mavesatra (Kadi Crocodile, sns.)
Tavoahangy tavoahangy misy divay (Wuliangye, sns.)
Famantarana akorandriaka sigara elektronika (izy irery, sns.)
Ahoana ny fametrahana ny mari-pamantarana aluminium:
1.Manaova tongotra ao ambadik'ilay marika:
Mandritra io karazana fametrahana io dia tsy maintsy misy lavaka roa ho an'ny tongotra mihitsoka eo amin'ny tontonana amin'ny vokatrao.
Ny adhesif misy lafiny roa dia miraikitra aorian'ny famokarana nataonay (misy adhesives mahazatra, 3m adhesives, adiresy Nitto ary safidy hafa)
3. fomba famonoana lava:
Ny lavaka dia azo totohondry amin'ny marika, izay azo apetaka mivantana amin'ny fantsika sy rivets.
Tsindrio ny tongotra aorian'ilay marika, ary apetaho avy eo ilay visy. Izany dia ampiasaina amin'ny vokatra audio
Nomera vy tsy misy fangarony
Takelaka kely misy takelaka vy tsy misy fangarony, toa tsotra, saingy tena misy ny fisafidianana fitaovana, ny fisafidianana ny hateviny, ny fizotran'ny fizotrany, ny fanodinana fitaovana, ny fanodinana ny fanodinana, ny fanodinana font ary ny LOGO ary ny lafiny hafa.
Matetika ny fizotry ny famokarana dia manisy tombo-kase, manao sokitra na manonta. Mandany vola ary mifanaraka amin'ny fironana. Izy io dia manana harafesin'ny kofehy manimba sy ny fizotrany mamirapiratra avo lenta. Ankoatr'izay dia mampiasa adhesive mahery hametahana azy, izay tena mety ampiasaina.
Ny nameplate tsy misy fangarony dia manana endrika metaly, fahatsapana avo lenta ary maivana kokoa, mampiseho kalitao fanao sy maoderina. Mateza mateza mateza mateza, mety be amin'ny vokatra ivelany.
Masiaka sy mahatohitra fanala izany. Ny tanjany dia mahatonga azy ho tena mety amin'ny angon-drakitra indostrialy na solosaina fametahana anarana ary marika fampahalalana.
Endri-javatra famantarana vy vy
1. Ny famantarana vy tsy misy fangarony dia misy vokany tsara hanohitra ny harafesina sy androm-piainana maharitra
2. Ireo fambara vy tsy misy fangarony dia manana endrika bika sy endrika avo lenta
3. Ny famantarana vy tsy misy fangarony dia miavaka amin'ny borosy sy ny famirapiratany
4. Ny marika vy tsy misy fangarony dia manana endrika metaly ary atmosfera avo lenta tokoa
5. fanoherana ny harafesina matanjaka, afaka manohitra ny harafesin'ny asidra, alkaly, sira ary zavatra hafa
6. fanoherana hafanana, fanoherana fanoherana ary fanoherana fanadiovana
7. firafitra vy mahery, manome vokany ambony
Fitaovana mahazatra amin'ny takelaka logo vy tsy misy vy:
Misy karazana marika vita amin'ny vy tsy misy fangarony, fitaovana vy tsy misy fampiasa matetika dia: 201, 202, 301, 304, 304L, 316, 316L, 310S, 410, 430, 439, sns. fitaovana.
Fomba isan-karazany amin'ny endriny:
Ny vokatry ny soritr'aretina vy tsy misy fangarony dia misy fitaratra, matte, fasika, borosina, harato, twill, CD, vodin-doha telo-hafa ary ireo vokatry ny endrika ivelany hafa; misy fomba faran'izay tsara sy safidy isan-karazany!
Toetra mampiavaka ny vy tsy misy vy:
Ny vy tsy misy fangarony dia manana ny fanoherana ny hafanana avo, ny fanoherana ny asidra sy ny alkali, ny fanoherana ny harafesina, ny fanoherana ny oksizenina ary ny fanoherana ny fiovana.
Teknika fototra mariky ny famantarana vy vy:
Ny fizotry ny fampiasana electrolysis hametahana sosona sarimihetsika vy eo ambonin'ny faritra, amin'izay dia manakana ny fitrandrahana vy, manatsara ny fanoherana, ny fitondra, ny taratra, ny fanoherana ny harafesina ary manatsara ny hatsarana.
Sokitra vy vy:
Izy io dia azo zaraina ho amin'ny etching madiodio sy ny etsa lalina. Ny etching marivo dia matetika ambany 5C.
Ny fizotran'ny fanontam-pirinty dia ampiasaina mba hamoronana endrika mazoto! Ny etsa lalina dia manondro ny etsa misy halalin'ny 5C na mihoatra.
Ity karazan-doko ity dia manana tsy fitoviana miharihary ary manana fahatsapana mahery vaika ny mikasika azy. Amin'ny ankapobeny, ny fomba fanorenan-tarehy fotosensitive dia ampiasaina;
Satria arakaraka ny halalin'ny hakamoana no mampidi-doza kokoa, ka arakaraka ny halalin'ny hakamoana no mahalany lafo ny vidiny!
Fanoratanao laser (laser fantatra amin'ny anarana hoe sokitra laser, marika laser)
ny sokitra laser dia fizotran'ny fitsaboana ambonin'ny tany, mitovy amin'ny pirinty amin'ny pirinty sy pirinty vita amin'ny pirinty, dingana fizahana fitsaboana ambonimbony izay mandoro ireo lamina na soratra eo ambonin'ny vokatra.
Ny electroplating dia ny fampiasana electrolysis hametrahana metaly na firaka eo ambonin'ilay sangan'asa mba hamoronana sosona vy mifangaro, matevina ary mifamatotra tsara, izay antsoina hoe electroplating. Ny fahatakarana tsotra dia ny fiovana na ny fitambaran'ny fizika sy ny simia.
Fampiharana ambaratonga famantarana vy tsy misy vy:
Fitaovana an-dakozia, fanaka, kojakoja an-trano, antsy, milina sy fitaovana, akanjo, hotely, vavahady, indostrian'ny fiara ary orinasa hafa.